Budata FSPX Airbus A350-900XWB FSX & P3D - Rikoooo
downloads 79 121
Ihe osise nke FSpainter, VC sitere n'aka Thomas Ruth, ụda si KelvinMckenzieFlightsim, nke Mees Jansen zukọtara.
Nke a bụ Airbus A350-900 ọhụrụ. ụgbọ elu ọhụrụ na-agbanwe agbanwe. Ejiri FSpainter rụpụtara ụkpụrụ ahụ na ndozi ya. Ekele FSpainter maka ihe nlereanya ahụ. Achịcha amamịghe ahụ bụ nke A330-300 sitere n'aka Thomas Ruth (ugbu a enweghị A350 VC ugbu a). Mpempe akwụkwọ mere ka mgbawa na ngwugwu nke Mees Jansen chịkọtara. Soro na ndozi 5.
The Airbus A350 XWB bụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu julbo ogologo oge nke ụgbọelu ụgbọelu Europe bụ Airbus. Na mbu a na-akpọ A350, a na - esite na ezinụlọ nke A330 na A340 ihe atụ a; Agbanyeghị, na-esochi nkwupute ndị na-ahụ maka ụgbọ elu, e kpebiri na etiti July 2006 iji tụleghachi echiche ahụ ma nye ya fuselage ka ukwuu, ma e jiri ya tụnyere A330 na A340, yana ọkachasị atụnyere isi ya na asọmpi, Boeing 787.
Emeghariri ihe oru ngo a dika "A350 XWB," - "extra Wide Body". Mgbanwe a oge ikpe azụ na atụmatụ iji ọtụtụ ihe mejupụtara emeela ka ụgwọ ọrụ ihe ụgbọ elu ahụ dị elu ma zigharịa ya na 2011 na 2014 ọ batara ọrụ (Wikipedia)
Onye edemede: Ihe osise nke FSpainter, VC sitere n'aka Thomas Ruth, ụda si KelvinMckenzieFlightsim, nke Mees Jansen zukọtara.